2 Ndị Kọrịnt 12 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Ndị Kọrịnt 12:1-21
12 Aghaghị m ịnya isi. Ọ baghị uru; ma m ga-agafe n’okwu metụtara ọhụụ+ ndị dị ebube na mkpughe nke Onyenwe anyị. 2 Amaara m otu onye ya na Kraịst dị n’otu, onye e bupụrụ+ otú ahụ wee buga ya n’eluigwe nke atọ, afọ iri na anọ gara aga—ma ọ̀ bụ n’anụ ahụ́, amaghị m, ma ọ̀ bụ na ọ bụghị n’anụ ahụ́, amaghị m; Chineke maara. 3 Ee, amaara m onye dị otú ahụ—ma ọ̀ bụ n’anụ ahụ́ ma ọ̀ bụ na ọ bụghị n’anụ ahụ́,+ amaghị m, Chineke maara— 4 na e bupụrụ ya, buga ya na paradaịs,+ o wee nụ okwu a na-apụghị iji ọnụ kwuo, nke iwu na-akwadoghị ka mmadụ kwuo. 5 M ga-eji onye dị otú ahụ nyaa isi, ma agaghị m eji onwe m nyaa isi, e wezụga n’ihe banyere adịghị ike m.+ 6 N’ihi na ọ bụrụ na ọ dị mgbe ọ bụla m ga-achọ ịnya isi,+ agaghị m abụ onye na-enweghị ezi uche, n’ihi na m ga-ekwu eziokwu. Ma adịghị m eme nke ahụ, ka onye ọ bụla wee ghara ikwu okwu ọma banyere m karịa ihe ọ hụrụ na m bụ, ma ọ bụ, ihe ọ nụrụ n’ọnụ m, 7 n’ihi otú ihe ndị ahụ e kpughere si dị ukwuu. Ya mere, ka m wee ghara ibuli onwe m elu gabiga ókè,+ e mere ka m nwee ogwu n’anụ ahụ́ m,+ ya bụ, mmụọ ozi Setan, ka ọ na-ama m ụra, ka e wee ghara ibuli m elu gabiga ókè. 8 N’ihi ya, ugboro atọ+ ka m rịọsiri Onyenwe anyị arịrịọ ike ka ihe a si n’ebe m nọ pụọ; 9 ma ọ gwara m n’ezie, sị: “Obiọma m na-erughịrị mmadụ ezuworo+ gị; n’ihi na a na-eme ka ike m zuo okè n’adịghị ike.”+ Ya mere, n’ụzọ kasị enye ọṅụ, ọ kaara m mma ịnya isi n’ihe metụtara adịghị ike m,+ ka ike nke Kraịst wee kpuchie m dị ka ụlọikwuu. 10 Ya mere, ana m enweta obi ụtọ n’adịghị ike, ná mkparị, n’ịnọ ná mkpa, ná mkpagbu na ihe isi ike, n’ihi Kraịst. N’ihi na mgbe m na-adịghị ike, mgbe ahụ ka m na-adị ike.+ 11 Aghọwo m onye na-enweghị ezi uche. Unu manyere m+ ịdị otú ahụ, n’ihi na m kwesịrị ịbụ onye unu na-ekwu okwu ọma banyere ya. N’ihi na aghọghị m onye dị ala n’ebe ndịozi ọkasị mma+ unu nọ n’otu mkpụrụ ihe, a sịgodị na ọ dịghị ihe m bụ.+ 12 N’ezie, e mere ka unu onwe unu hụ ihe na-egosi na m bụ onyeozi+ site ná ntachi obi niile,+ site n’ihe ịrịba ama na ihe ebube na ọrụ dị ike.+ 13 N’ihi na olee otú unu si ghọọ ndị dị ala karịa ọgbakọ ndị ọzọ, ma e wezụga na mụ onwe m aghọrọghị unu ibu arọ?+ Jirinụ obiọma gbaghara m mmejọ a. 14 Lee! Nke a bụ nke ugboro atọ+ m jikeere ịbịakwute unu, ma agaghị m abụ ibu arọ. N’ihi na ọ bụ unu onwe unu ka m na-achọ, ọ bụghị ihe unu nwere;+ n’ihi na ọ bụghị ụmụ+ kwesịrị ịkpakọbara ndị mụrụ ha ihe, kama ọ bụ ndị mụrụ ụmụ kwesịrị ịkpakọbara ụmụ ha ihe.+ 15 Mụ onwe m ga-eji oké ọṅụ mefuo ihe niile, kwekwa ka e jiri m mee ihe n’ụzọ zuru ezu n’ihi mkpụrụ obi unu.+ Ọ bụrụ na m hụrụ unu n’anya nke ukwuu, ò kwesịrị ka unu hụ m n’anya nke nta? 16 Ma n’agbanyeghị nke ahụ, eboghị m unu ibu arọ.+ Ka o sina dị, unu na-asị, adị m “akọ,” ejikwa m “ụzọ aghụghọ” jide unu.+ 17 M̀ rigburu unu site n’aka onye ọ bụla n’ime ndị ahụ m ziteere unu? 18 Ọ bụ m rịọrọ Taịtọs ka ọ bịakwute unu, ọ bụkwa m zipụrụ nwanna ahụ so ya. Taịtọs erigbughị unu ma ọlị, ka ò rigburu unu?+ Ọ̀ bụ na anyị ejegharịghị n’otu mmụọ ahụ?+ Ọ̀ bụ na anyị ejegharịghịkwa n’otu nzọụkwụ ahụ? 19 Ùnu anọwo na-eche n’oge a niile na anyị anọwo na-azara ọnụ anyị n’ihu unu? Ọ bụ n’ihu Chineke ka anyị na-ekwu okwu n’ime Kraịst. Ma, ndị m hụrụ n’anya, ihe niile bụ maka iwuli unu elu.+ 20 N’ihi na egwu na-atụ m na, mgbe m bịarutere,+ m nwere ike ịhụ unu otú m na-achọghị, m nwekwara ike ịdị unu otú unu na-achọghị, ma, kama nke ahụ, e nwere ike inwe esemokwu, ekworo,+ iwe iwe, ndọrọ ndọrọ, ikwu okwu azụ, ntamu, nfụli elu, ọgba aghara.+ 21 Ma eleghị anya, mgbe m bịara ọzọ, Chineke m pụrụ ime ka ihere mee m n’etiti unu, m pụkwara iru uju banyere ọtụtụ n’ime ndị mere mmehie+ n’oge gara aga ma bụrụ ndị na-echegharịbeghị n’adịghị ọcha na ịkwa iko+ na omume rụrụ arụ+ ha nọ na-eme.
2 Ndị Kọrịnt 12